सपनामा सेक्स गर्दा के हुन्छ ? - StarPratika.com
सपनामा सेक्स गर्दा के हुन्छ ?
आखिर के हो त सपनाको सेक्स ? सपनामा किन हुन्छ सेक्स ? यसको अर्थ के हुन्छ ?
यी प्रश्नहरूको उत्तरका लागि एक सेक्स साइकोलोजिष्टको धारणा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ –
हरेक सामान्य मान्छेले विपनामा त सेक्स गर्छ नै यदाकदा सपनामा पनि सेक्स गरेको देख्छ । सपनामा कोही चरमोत्कर्ष अगाडि नै निद्राबाट ब्यूँझन्छन् भने कोही स्वप्नदोषको शिकार हुन्छन् र ब्यूँझेपछि उनीहरु खिन्न बन्छन् ।
कहिलेकाहीँ आफ्नो वरिपरीको चिनजानको व्यक्तिसँग सेक्स गरेको सपना देखिन्छ । कुनै परिचित व्यक्तिप्रति अत्यधिक आकषिर्त भएर पनि मनको भावना प्रकट गर्न सकिएन भने त्यस्तो सपना देखिन्छ।
प्रकाशित मिति : 2019-06-30
सेन्टी भाइरस’ को मध्यपूर्वको राइट्स खरिद गरे मन्दिप अधिकारीले
यु ट्युबबाट चर्चित बन्दै अनिताको तीज गीत ”टिकटकमा भिडियो ”